Firehetana nahafaty :: Lehilahy lehibe sy ankizy roa may kila tao an-trano • AoRaha
Tranga mampalahelo no niseho tany amin’ny kaominina Ambararatabe, distrikan’i Tsiroanomandidy, tamin’ny alin’ny alarobia lasa teo. Olona telo: lehilahy, 76 taona, sy ankizilahy roa, 8 sy 10 taona, no niara-namoy ny ainy vokatry ny fahamaizana tao an-tranon’izy ireo. Maty voadaroky ny fokonolona kosa ny lehilahy iray, manodidina ny 23 taona, voatondro ho nandoro ny trano nisy azy telo mianaka ireo.
Tany amina tanàna iray, sivy kilaometatra miala an’Ambararatabe, no nisian’ ity fandorana trano nahafatesana olona ity. Tokony ho tamin’ny valo ora alina no nitrangan’ny loza. Fantatra fa mpihavana ny olona telo mianaka niharam-boina sy ilay lehilahy ninia nandoro ny trano nisy azy ireo.
« Tratran’ny mpiambina ao amin’ny andrimasompokonolona teo am-pandoroana trano tafo bozaka iray misy rihana ny lehilahy iray. Niantsoantso nanakana azy ireo mpiambina saingy nirifatra nandositra izy. Tonga ny fokonolona nanampy tamin’ny fanenjehana. Ny sasany namono ny afo sady nanavotra ny olona sy ny entana tao amin’ny trano nirehitra », araka ny fanampim-baovao avy amin’ny zandary, any Ambararatabe.
Nihidy avy taty ivelany ity trano nodorana. Tafavoakan’ny fokonolona ny entana sasany saingy tsy avotra kosa ny olona telo tao antrano. Kilan’ny afo tanteraka ny vatan’ilay lehilahy lehibe sy ilay zaza, 8 taona.
« Nanohitra ilay lehilahy voasambotra. Izay no nahatonga ny fokonolona nidaroka azy. Maty teo no ho eo izy. Tsy fantatra sady tsy nisy nahita ny zava-niseho tao amin’io trano io, mialoha ny fahamaizany. Hanaovana fanadihadiana ny havan’ ireo namoy ny ainy hamantarana ny mety ho antony na disadisa nitarika ny loza », hoy ihany ny zandary manao ny famotorana.
Zava-mahadomelina :: Zandary iray naiditra am-ponja
Taranja mekanika :: Miandrandra fifaninanana efatra ny Federasionan’ny hazakaza-piarakodia